UDkt Nokuthula Cele noDkt Janine Hicks.
UDkt Nokuthula Cele weSikole seZifundo ngeNhlalo yoMphakathi kanye noDkt Janine Hicks weSikole sezoMthetho baklonyeliswe ngokuvelela ekwesekeni ngokufundisa nokufunda.
Lemiklomelo ikhishwe emcimbini wemiklomelo waminyaka yonke ama-Culture Cluster (eKolishi lezesiNtu) Awards.
Umholi weQoqo (wakwa-Antropholoji neZokuvakasha) uDkt Maserole Kgari-Masondo uthe: ‘Lomklomelo ngowalezizibani ezimbili eziqhubeka nokwandisa ukuzwana kwamasiko eNyuvesi yethu. UDkt Cele uyakhuthazana. Nakuba egula kakhulu kodwa wenze umsebenzi omuhle wangagcina ngokwenza umsebenzi wakhe, wedlulela ekulekeleleni abafundi nabafundisi bethu. Sibonga noDkt Hicks oshintshe isimo sase-UKZN ukuqinisekisa ukuthi iyngxoxo ngokuhlukumezeka ngokobulili ziyenzeka ngokungesabi. Ungumfundisi onomfutho ofanayo egumbini lokufundisa nasemphakathini.’
U-Hicks uthe: ‘Ngigcwele ukubonga okukhulu ngokuhlonishwa ngabalingani eqoqweni lezesiNtu. Sonke besisebenza ngaphansi kwezimo ezinzima, ikakhulu abafundi bethu. Ngibonga amathuba okuthi sihlangane ukuxoxa ngomsebenzi nokufunda ngayo yonke imikhakha nokwabelana ngezindlela ezinhle zokufundisa nokufunda.’
U-Hicks ungusihlalo we-UKZN Gender-Based Violence Committee, kanti njengomdidiyeli we-Navi Pillay Research Group, iqoqo lezifundiswa zeSikole soMthetho elizimisele ukubhekana nezinto zobuhlanga, ukungalingani, ubulili nokukhubazeka eNingizimu Afrika ngocwaningo, uhamba phambili kwezomthetho noshintsho enqubweni yokwenza izinto.
Uyisikhulu soMsebenzi i-Project 143: Maternity and Paternity Benefits for Self-Employed Workers we-SA Law Reform Commission kanti wake wabanguKhomishana we-South African Commission for Gender Equality. U-Hicks uneziqu zobudokotela kwezomthetho zase-UKZN, iMastazi yase-University of Sussex ne-LLB yase-University of Natal.
UCele, ofundisa i-Culture and Heritage Tourism Programme ophikweni oluse-Howard College, uneziqu zobudokotela kweZomlando zaseMelika. Ngaphambi kokufundisa e-UKZN, wayefundisa e-Hope College, e-Michigan. Phakathi kwezinto athanda ukucwaninga ngazo kukhona ezasemanzini, ezokuhlaliswa kwabantu nokuhlukumeza ngokobulili.